» क्याम्पसलाई प्रदेशको शैक्षिक हवको रुपमा विकास गर्छु : आकाश अधिकारी – स्ववियू सचिव, मकवानपुर क्याम्पस
क्याम्पसलाई प्रदेशको शैक्षिक हवको रुपमा विकास गर्छु : आकाश अधिकारी – स्ववियू सचिव, मकवानपुर क्याम्पस
२०७५ माघ २७,आईतवार १४:२३
मकवानपुर २७ माघ । मकवानपुर बहुमूखी क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको सरगर्मी सुरु भएको छ । निर्वाचनको लागि विभिन्न पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनका ७ जना विद्यार्थीहरुले स्ववियु सभापतिको लागि आफुले उम्मेदवारी दिने सोचमा रहेको बताएका छन् ।
विद्यार्थीहरुले स्ववियु निर्वाचनमा संगठनले विश्वास गरेर आफूलाई टिकट दिए समग्र विद्यार्थी र क्याम्पसको हितमा काम गर्ने बताएका छन् । यसै बीचमा तु खबरले एमाले निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका जिल्ला सचिवालय सदस्य एवं मकवानपुर बहुमूखी क्याम्पसका स्ववियु सचिव आकाश अधिकारीसंग कुराकानी गरेको छ ।
उनले आफूपनि क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचनको लागि सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने सोचमा रहेका छन् । प्रस्तुत छ, यिनै अधिकारीसँगको काराकानी :
प्रश्न : स्ववियु निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने भन्दै तयारी गरिरहनुभएको छ त ?
जवाफ : हो, म मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु सभापतिको लागि निर्वाचन भएको खण्डमा उम्मेदवारी दिने सोचमा छु । तर यसको मतलब मेरो मनोमानी तरिकाले भन्ने होईन ।
अनेरास्ववियु एउटा विधि र प्रक्रियाले चल्ने संगठन हो । यो संगठनले निर्वाचन हुने भयो भने एउटा मापदण्ड बनाउँछ त्यो मापदण्ड अनुसार म योग्य भए भने र सबैको साथ रहे मैँले टिकट पाउँछु । अब कुरा गरौं तयारीको ।
तयारीको बारेमा भन्नुपर्दा अधिकाँश विद्यार्थीहरुले स्ववियुबाट आश राख्नुभको छ । र, मलाई तपाई उम्मेदवारी दिनुस् भन्नु भएको छ । त्यसकारण मनोबल पनि बढेको छ । तयारी पनि गरिरहेको छु ।
प्रश्न : संगठनले टिकट तपाईलाई दिन्छ त ?
जवाफ : मैंले पहिले पनि भनेको छु । संगठनको मापदण्ड अनुसार टिकट दिने हो । अनेरास्ववियुको पहिलेको मापडण्डमा केहि फेरबदल भएन भने म पूर्ण रुपमा स्ववियु सभापतिको लागि योग्य हुन्छु । विद्यार्थी र संगठनका अग्रजहरुको पनि माया मलाई नै छ ।
त्यसकारण मैंलेनै टिकट पाउँछु जस्तो लाग्छ । आजसम्म विद्यार्थीको समस्यामा म कहिलेपनि पन्छिएको छैन । विद्यार्थीको विस्वास मनै हुँ । संगठनले राम्रो काम गर्ने र माहौल हुनेलाईनै टिकट दिने त हो नि ।
प्रश्न : निर्वाचनको विषयनै टुङगोमा पुगेको छैन, किन हतार गरेको ?
जवाफ : तयारी नै जितको संकेत हो । मैंले निर्वाचन हुने संभावना देखेँ त्यसकारण म पनि हो भनेर सार्वजनिक गर्न मात्रै खोजेको हो । फेरी सबैको चासो पनि छ । निर्वाचनको माहौल चै, विद्यार्थीहरुको चासोले गर्दा पनि हो ।
तयारीको नाममा मैंले क्याम्पसको अध्यापनलाई कुनै असर पर्ने क्रियाकलाप गरेको छैन । बरु सबैसंग अब आउने सभापतिले के गर्दा क्याम्पस र विद्यार्थीको हित होला भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छु । अध्ययन गर्दैछौं थोरै तयारी पनि ।
प्रश्न : के के छन् त योजना ?
जवाफ : योजनाहरुमा सर्वप्रथम त स्ववियुको सहकार्य क्याम्पस व्यवस्थापन समितिसंग थप मजबुँद बनाउँछु । अनि सबै विद्यार्थीको मनोभावना बुझेर क्याम्पस व्यवस्थापन समितिसंगको सहकार्यमा थुप्रै काम गर्ने ईच्छा राखेको छु ।
प्रदेशकै शैक्षिक हब बनाउने योजनापनि छ । क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नै प्रदेश नम्बर ३ को मुख्यमन्त्री भएकाले पनि उहाँको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश ३ लाई शैक्षिक हवको रुपमा विकास गर्ने योजना छ ।
त्यस विषयमा मैंले जोड दिनेछु । अनि क्याम्पसको लाईबेरी व्यवस्थापन, विद्यार्थीलाई दिईने छात्रवृत्ति लगाएतका विषयमा काम गर्छु ।
अनि क्याम्पसको समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा विकास गर्न मेरो मद्धत रहन्छ । जसमा मकवानपुर बहुमूखी क्याम्पसमै कानुन विषय पढाईहुने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्छु । प्राविधिक शिक्षा पनि यस क्याम्पसबाटै अध्यापन हुने व्यवस्था मिलाउँछु ।
ईन्जिनियरिङ विषय पनि यसै क्याम्पसका अध्यापन गराउँने व्यवस्था मिलाउँछु । अनि विषयको विविधिकरणमा पनि ध्यान दिन्छु ।
प्रश्न : तपाईहरुलाई अन्य संगठले सहयोग गर्ने कुरा छ की ?
जवाफ : आधिकारिक रुपमा सहयोगको कुरामा केही छलफल भएको छैन । अखिल क्रान्तिकारी र नेवि संघको पनि साथीहरु उम्मेदवारीको तयारीमा हुनुहुन्छ ।
त्यसकारण व्यत्तिगत रुपमा विद्यार्थीहरुसंग मेरो निकै राम्रो सम्बन्ध छ तर संगठनहरुले सहयोग गर्ने कुरामा आधिकारी धारणा राखेका छैनन् । म प्रति सबै संगठन सकारात्कम भने पक्कै छन् ।